Iindaba-UkuBala ngokuKhanya: Umzi mveliso wezoqhakamshelwano uya kuba ngowokuqala ukufumana kwakhona kwi-COVID-19
Ukukhanya kweLight: Umzi mveliso wezonxibelelwano obonakalayo uya kuba ngowokuqala ukufumana kwakhona kwi-COVID-19
Ngo-Meyi., 2020, i-LightCounting, umbutho wophando lwentengiso owaziwayo, wathi nge-2020, umfutho wophuhliso lweshishini lonxibelelwano lokukhanya unamandla kakhulu. Ukuphela kwe-2019, ibango le-DWDM, i-Ethernet, kunye ne-fronthaul engenazingcingo inyukile, kukhokelela kunqongopheleko kwetyathanga lokubonelela.
Nangona kunjalo, kwikota yokuqala ye-2020, ubhubhane we-COVID-19 wanyanzelisa iifektri kwihlabathi liphela ukuba zivale, kwaye uxinzelelo lokubonelela ngoncedo lwenyuka lwaya kwinqanaba elitsha. Uninzi lwababoneleli becandelo baxela ingeniso engaphantsi kunoko bekulindelwe kwikota yokuqala yowama-2020, kwaye okulindelweyo kwikota yesibini akuqinisekanga. Umzi-mveliso wase-China uvulwe ekuqaleni kuka-Epreli, kodwa uninzi lweenkampani zaseMalaysia nasePhilippines zisavaliwe, kwaye iinkampani zase-Yurophu naseMntla Melika zisandula ukuqala ukusebenza. ILightCountin ikholelwa ekubeni ibango langoku lonxibelelwano lwe-Intanethi kuthungelwano lonxibelelwano kunye namaziko edatha omelele ngakumbi kunasekupheleni kwe-2019, kodwa ezinye iiprojekthi zenethiwekhi kunye nedatha yolwakhiwo lwedatha zilibazisekile ngenxa yesifo. Abaxhasi bemodyuli ebonakalayo abanakukwazi ukuhlangabezana nesicwangciso sabo sokuqala semveliso kulo nyaka, kodwa ukwehla okubukhali kumaxabiso emveliso kunokucotha kwi-2020.
I-LightCounting ilindele ukuba ukuba umzi-mveliso uphela uza kuvulwa kwakhona kwisiqingatha sesibini salo nyaka, icandelo le-optical kunye nabathengisi bemodyuli baya kuphinda baqalise ngemveliso epheleleyo kwikota yesine yowama-2020. Kulindeleke ukuba ukuthengiswa kweemodyuli ezibonakalayo kunyuke ngokuphakathi kwi-2020 kwaye kuyonyuka ngo Iipesenti ezingama-24 ngo-2021 ukuhlangabezana neemfuno zobubanzi bebhendi enkulu yezicelo.
Ukongeza, eqhutywa lulwakhiwo olukhawulezayo lwe-5G e-China, ukuthengiswa kwezixhobo ezibonakalayo ze-wireless fronthaul kunye ne-backhaul kuyonyuka nge-18% kunye ne-92%, ngokwahlukeneyo, esejolise kulo nyaka. Ukongeza, ukuthengiswa kweemveliso ze-FTTx kunye nee-AOC kwicandelo lokudityaniswa kwamehlo, kuqhutywa kukuthunyelwa e-China, kuya kukhula ngamanani aphindwe kabini ngo-2020. Isabelo sentengiso se-Ethernet kunye ne-DWDM siza kuphinda siqale ukukhula ngamanani aphindwe kabini ngo-2021.